Sanya dia mandefa hetsika fampiroboroboana ny fizahan-tany iraisam-pirenena any Indonezia
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Sanya dia mandefa hetsika fampiroboroboana ny fizahan-tany iraisam-pirenena any Indonezia
Jolay 28, 2017
Ny Fankalazana an'i Sanya 2017 (ny "Fankalazana"), hetsika fampiroboroboana ny fizahan-tany iraisam-pirenena nataon'ny governemanta monisipaly ao Sanya, Sina, dia notontosaina tamin'ny 27 Jolay tao Djakarta, Indonesia, mba hampahafantarana an'i Sanya, ilay tanàna fialantsasatra tropikaly malaza any amin'ny morontsiraka tropikaly malaza. an'ny China South.
Nozaraina ho fizarana roa ny Fankalazana ka anisan'izany ny sori-dalana sy ny fivoriana fampiroboroboana, izay nahasarika manampahaizana manokana momba ny indostria sy mpanao gazety 150 ho tonga. Ao amin'ny sehatry ny fampirantiana, ireo mpandray anjara dia afaka niaina ny hatsarana sy ny kolontsaina an'i Sanya tamin'ny alàlan'ny sary, lalao Virtual Reality (VR), fampisehoana sakafo ary fahafinaretana hafa. Ireo teratany vitsy an'isa Li sy Miao ao an-toerana Hainan dia nitondra ny fampisehoana kolontsain'izy ireo tamin'ny fihirana sy fandihizana.
Nandritra ny fihaonana fampiroboroboana dia nanasongadina ny fitomboan'ny fahatongavan'ny iraisam-pirenena ny governemantan'i Sanya, natosiky ny fitomboan'ny fahafantarana ireo toerana mahafinaritra an'i Sanya, toa an'i Tianya Haijiao (faritra tsara tarehy amoron-dranomasina any Sanya), Nosy Wuzhizhou, Nosy Andrefana, Bay Yalong Tropical Paradise Forest Park ary maro hafa. Mandritra izany fotoana izany, malaza ihany koa ireo fitsangatsanganana sakafo, fitsangatsanganana fampakaram-bady, fitsangatsanganana golf ary fitsangatsanganana fitsaboana nentim-paharazana sinoa ary nampahafantarina tamim-pahamatorana.
"Sanya dia te-ho tonga toerana fizahan-tany ambony miaraka amin'ny hatsarany voajanahary sy ireo tetik'asa misy kolontsaina maro karazana," hoy i Deng Zhong, filoham-boninahitry ny Fikambanan'ny Vondron'olona Sanya ho an'ny firenen-kafa. "Manantena izahay fa hisarika mpitsidika any ivelany bebe kokoa handeha, hiasa sy hipetraka ao an-tanàna, ary hanana mpampiasa vola bebe kokoa hijerena tombontsoa amin'ny fampiasam-bola vaovao koa."
Pan Yonglu, mpanolotsaina ao amin'ny masoivoho sinoa any Indonezia, dia nanambara fa samy manana ny loharanom-pahalalana fizahan-tany sy fahasamihafana ara-kolontsaina i Indonezia sy i Sanya. Fanandramana mendrika ho an'ireo mpizahatany avy any Indonezia ny mandeha sy mizaha.
Indonezia sy Sina dia tsenan'ny fizahantany lehibe ho an'ny tsirairay. Tamin'ny taon-dasa, manodidina ny 1.4 tapitrisa ny mpizahatany sinoa nitsidika an'i Indonezia, izay nitombo 8% isan-taona. Nanjary tsena fizahan-tany laharana faha-1 ho an'i Indonezia i Sina ary i Indonezia koa no toerana fitsangantsanganana laharana faha-6 ho an'ireo mpizahatany sinoa.
Ny Sriwijaya Air any Indonezia dia namoaka làlana vaovao telo nanomboka ny volana Jona ho any Jakarta mankany Haikou, Jakarta, hatrany Nanning, ary Denpasar mankany Nanning, izay manantena ny hampiakatra avo roa heny ny isan'ireo mpandeha iraisampirenena ho 1 tapitrisa amin'ny taona 2017. Ny halaviran'ny rivotra avy any Haikou mankany Sanya dia 218 Kilometatra (135 miles).
Manomboka amin'ny Jolay ka hatramin'ny septambra, ny fankalazana dia hatao any Thailand, Malaysia, Indonesia, Kazakhstan, Russia, United Kingdom, Alemana, Singapore ary India. Ny dingana faharoa ho avy amin'ny fankalazana dia any Russia sy Kazakhstan amin'ny 6 ka hatramin'ny 11 Aogositra.